Kedu ka esi akụ ihe lemon?
Na-eto eto lemon n'ụlọ nwere ike ime, ma ọ gaghị ekwe omume ịnakọta mkpụrụ ya na mbụ karịa afọ asatọ. Iji nweta mkpụrụ n'ụlọ, ọ dị mkpa ịkụkwa lemon. Ekem, ke ọyọhọ isua iba, enye ọtọn̄ọ ndidọk mfri ndien enye ayenyene ndikpep akpa mbun̄wụm.
Kedu ihe inoculation? Nke a bụ usoro nke na-ebufe mkpụrụ osisi (buds) nke otu osisi gaa na ọzọ na coalescence ọzọ. Inoculation nke lemon n'ime ụlọ na-enye gị ohere ịmịlite mkpụrụ osisi dị mma ma ọ bụrụ na ị naghị eji kemistị ma ọ bụ ihe na-akpali akpali.
Kedu ka esi lemon lemon: nkwadebe maka ọrụ
Tupu ị nwee ike ịgba ọgwụ lemon, ịkwesịrị ịkwado mgbọrọgwụ na nchekwa. A na-akpọ ngwaahịa a osisi nke ị na-aga ịkụ mkpụrụ. Mkpụrụ osisi kwesịrị ịbụ ọ dịkarịa ala afọ 3, na ogwe aka ya kwesịrị ịbụ ihe dịka 6 mm. Na mgbakwunye na lemon, ị nwere ike akụ osisi ahụ na mkpụrụ osisi citrus ndị ọzọ: mandarin oroma ma ọ bụ oroma, dịka ọmụmaatụ.
Privoy na-akpọ stalk, nke ị ga-akụ na osisi ahụ. Tupu ịkụnye lemon anụ ụlọ, a ghaghị idocha aka. Ndị a bụ osisi ala ndị a kwadebere, bụ ndị dị afọ 1-2, site na osisi na-amị mkpụrụ. Akuku a kwesịrị iwepu ogwu, akwukwo osisi, ma wepu petioles na akụrụ.
Kwesịa ịkụzi lemon ngwa ngwa mgbe ị ga-egbutu osisi. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, mgbe ahụ, a na-ekechi wax ahụ na ákwà dị nro ma tinye ya na akpa cellophane. A ga-echekwa ngwugwu ahụ na friji, ma ọ bụghị ihe karịrị otu izu.
Ụzọ nke grafting a lemon
Ọtụtụ mgbe, a na-eji usoro grafting mee ihe maka grafting na cleavage. Usoro mbu nwere ike iji mee ihe n'oge ọ bụla n'afọ, mana nhazi ahụ kwesịrị ekwesị maka oge arụ ọrụ sap: April-May. Ejiri ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-enwe "eyeball" na-ehi ụra na August. Tupu ị kụọ lemon ahụ, dozie ngwaọrụ niile dị mkpa. Jide n'aka na ịkwadebe mma a magburu onwe ya, pruner. Ọtụtụ ndị na-eji scalpel ma ọ bụ agụba kama mma. Maka grafting, ị chọrọ otu ogige dị iche iche, ihe na-agbanwe agbanwe. Ugbu a, n 'nkọwa zuru ezu, tụlee ụzọ abụọ nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Usoro nke budding na-adabere na transplantation nke nwa osisi nke osisi emezu n'ime seedling. Site na osisi na-amị mkpụrụ anyị na-ebu osisi ma na-ahọrọ akụrụgwụ mepụtara na ya. Mee ọhụụ abụọ: 1 cm elu na 1.5 cm ala karịa "anya". Jiri nlezianya kụọ akụrụ ya na ogbu mmiri tinyere ihe ndị ahụ e depụtara. Gbalịa weghara dị ka obere osisi dị ka o kwere mee. Wepu akwukwo akwukwo site na akụrụ ma tinye ya na ebe ozo. Ugbu a ọ bụ oge iji kwadebe seedling. Bee ya na elu ma ọ dịkarịa ala 10 cm si n'ala. Anyị na-eji mma ma ọ bụ na-agbapụta ogbugbo. N'ebe a, ọ dị mkpa ịkwado stalk njikere. Tinye ntu aka na-ejikwasị ya na mpempe akwụkwọ na-agbanwe, na-ahapụ stalk na akụrụ site n'èzí. A na-esite na mkpuru ahịhịa nke mgbọrọgwụ ahụ na tee ihe ubi, ebe n'okpuru aka a na-ejikwasị ajị anụ uhie. E wepụrụ bandeeji ahụ karịa otu ọnwa.
Kedu ka esi esi kpoo lemon? N'okwu a, nwa ebu n'afọ bụ alaka ụlọ osisi na-amị mkpụrụ na ọtụtụ akwụkwọ. Bee ya obliquely, dị n'okpuru obere akụrụ. Ndien ke 10 cm n'elu n'elu akụrụ na-eme ọbụna bee. Ghaa mkpụrụ osisi ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka nke mbụ. N'elu osisi ahụ, a na-esi na akụkụ abụọ mee ya, n'ihi ya, ọ ga-ewere ụdị mpempe akwụkwọ na akụkụ dị nkọ. Ọzọ na etiti, ọ dị mkpa iji mee ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị ka cm 2. Iji kpoo lemon ahụ n'ụlọ na usoro a, a na-etinye mkpịsị ahụ n'ime mbepụ ahụ ka ọ wee banye kpamkpam na ogbugbo nke osisi abụọ ahụ. Tinye nchikota ọzọ na teepu, mepee akụkụ nke osisi ahụ. A ga-edebe bandeeji maka ihe dị ka otu ọnwa na ọkara.
Ntak emi anthurium ama adaha?
Na-arịgo osisi maka ụlọ obibi
Akpọrọ na-apụ dị ka fatịlaịza maka ubi ahụ
Hyacinth - iwu dị mkpa maka ịkụ ihe ma lekọta
Nkịtị hazel - kụrụ ma lekọta
Gardenia - nlekọta ụlọ, Atụmatụ na usoro
Strawberry na-eto eto n'ụlọ
Akuku ihe ubi mgbe owuwe ihe ubi
Kuril tii - kụrụ ma lekọta
Olee esi akụ carrots?
Azalea ubi - ihe niile eji eji ejiji na-eto eto rhododendron
Mmehie nke mmadu - nmehie kacha njọ na ndi Orthodoxy
Siri ovarian uzo
Akpụkpọ ụkwụ Platform 2015
Oncology nke eriri afọ - mgbaàmà na ihe ịrịba ama nke ọrịa
Kedu ka esi aga Abkhazia?
Dakota Johnson weghachite agba agba ntutu
Kedu ihe inye di ya afọ 40?
Coleus - nlekọta ụlọ
Guinea Pig na Peruvian
Kedu ka ngwa ngwa na-eto eto?
Bella Hadid kwuru banyere akwụkwọ akụkọ ya na Jordan Barrett
Mpụ na isi nke nwatakịrị afọ 3
Mgbidi na-agbanye ọkụ ọkụ
Kedu esi eji faksị?
Blue na akwụkwọ ahụ aja